History – My Life Magazine
HistoryDecember 23, 2019
न् २००७ र २०१६ बीच पुरातत्वविदहरुले मध्य इङ्ल्याण्डमा ‘बेरीफिल्डेस ’ भनिने रोमन बस्ती उत्खनन् गरे । स्मिथ सोनियन संस्थाका अनुसार १७ सय वर्षसम्म चारवटा कुखुराको अण्डालाई पानीले भरिएको खाडलमा जोगाइएको थियो । जसमध्ये केही दुर्घटनावश…
HistoryAugust 8, 2019
Editor’s note: This isatranslation by Niranjan Kunwar of an article from Uttam Kunwar’s anthology, Anubhav ra Anubhuti (Experience and Sensations), first published by Rupayan Press, Kathmandu, in 1981. This essay was first published…
बिष्णु लामीछाने, प्रकृति न्यौपाने झापा - अहिले रेडियो बज्दा, सुत्दा कसैलाई अनौठो लाग्दैन । रेडियो, मोबाइल, टेलिभिजन सेट लगायत थुप्रै ग्याजेटहरुमा सजिलैसँग रेडियो सुन्न सकिन्छ । तर पहिलो पटक रेडियो मानिसको कानमा गुन्जदा कस्तो अनुभव…
पुरुषका लागि बनेको थियो स्यानिटरी प्याड, यस्तो छ…
कुनै समय थियो मानिसहरु सार्वजनिक रुपमा स्यानिटरी प्याडका बारेमा कुरा गर्नु त परै जावत त्यसलाई हेर्न पनि हिच्किचाउँथे । यद्यपि आजसम्म पनि यसबारेमा कुरा गर्न मानिसहरु उतिसारो खुल्दैनन् । अहिले महिलाहरुले रजश्वलाका बेला अधिक प्रयोग…
श्राद्ध किन गरिन्छ ? यस्तो छ घतलाग्दो पक्ष
HistorySeptember 27, 2018
शास्त्रहरूमा बताइए अनुसार अहिले चलिरहेको पितृपक्ष एक प्रकारले पितृहरूको सामूहिक मेला हो । यो पक्षमा सबै पितृहरू पृथ्वीलोकमा बस्ने आफ्ना सन्तानहरूकहाँ बिना आहृवान नै आउँछन् अनि उनीहरूले अर्पण गरेका गरेका तर्पण, पिण्ड आदि प्रसादबाट तृप्त…
के अर्थ लाग्छ रावणका दश टाउकाको ?
HistoryAugust 24, 2018
कसरी शुरु भयो नागपञ्चमी ? यी हुन् प्रचलित…
HistoryAugust 16, 2018
यसबर्ष साउन ३१ गते बिहीवार नागपञ्चमी परेको छ । नागपञ्चमीका बारेमा प्रचलनमा रहेका दुईवटा कथाहरू हामी यहाँ बताउँदैछौं । कथा १ एक राजाका सात पुत्र थिए । उनीहरू सबैको विवाह भइसकेको थियो । तीमध्ये ६…
HistoryAugust 9, 2018
सनातन धर्ममा गोत्रको धेरै महत्व हुन्छ । ‘गोत्र’को शाब्दिक अर्थ त धेरै व्यापक हुन्छ । यद्यपि विद्वानहरुले समय–समयमा यसरबारे यथोचित व्यख्या गरेका छन् । ‘गो’ अर्थात् इन्द्रिय, र ‘त्र’ आशय हुन्छ ‘रक्षा गर्नु’ । अतः…
HistoryJune 29, 2018
परम्पराको नाममा अहिले पनि दुनियाँमा अनेकथरि कार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये चीनको घोस्ट म्यारिज अर्थात् भूत विवाह पनि एक हो । चीनका केही ग्रामीण भागमा अहिलेपनि ३ हजार वर्ष पूरानो यो परम्परा चल्दै आएको छ ।…